Okwu nke otu peeji wụpụrụ mpempe akwụkwọ ka m na-agụ ha. Banyere ndị dere akwụkwọ a, aga m agụgharịrị isi okwu nke ndu ma tinye ha n'usoro mgbasa ozi nke otu nzukọ:
Ngwa ọrụ - chọpụta mmefu ego, ndị ọrụ, akụ, akụrụngwa, ndị ndụmọdụ, na oge dị maka mkpọsa ọ bụla.
nhọrọ - chọpụta mkpọsa kachasị mma, ịdabere na ịhọrọ mfe mkpọsa na itinye uche n'ihe ebe ha ga-enwe mmetụta dị ukwuu.
Na-ekenye ọrụ - mee ka ndị ọkachamara gị rụọ akụkụ ụfọdụ nke atụmatụ ahụ ka ị nwere ike ịla azụ ma buru onye isi n’usoro ahụ niile. Ọ bụ ọrụ gị iji hụ na ezere nkwekọrịta, ma na-etinye ego iji hụ na ịga nke ọma na ozi ọma.
Brief - ikwuputa atụmatụ a nye ndị niile sonyere na ịkwado akụ, na-ekwusi ike ebumnuche onye ndu.
Nkọwapụta - Nyochaa ihe mmụta mụtara ma tinye ha n'ọrụ na atụmatụ n'ọdịnihu mgbe emechara mkpọsa ahụ.
Enwekwara ndị isi a na-adịghị ahụ anya ebe a nke na-ekwesịghị ịmara. Ọ bụrụ na nke a bụ otu ị si jikwaa ngalaba ahịa na mmefu ego gị, mkpọsa ọ bụla ga-adaba na ebumnuche nke nzukọ a. O juru anyị anya na ọrụ ndị ahịa anyị gwara anyị ka anyị rụọ nke na-anaghị arụ dozie na uru bara uru nye nzukọ ahụ. Ọ bụrụ na ọ naghị enyere gị aka - kwụsị ime ya!